El Niño Southern Oscillation | Reef Resilience
Ny El Niño Southern Oscillation (ENSO) dia fiovan'ny vanimpotoana misy ny rafi-dranomasina ao amin'ny Pasifika tropikaly izay misy fiatraikany amin'ny toetr'andro manerantany. Mitranga izany isaky ny 3-7 taona (5 taona eo ho eo) ary matetika maharitra sivy volana ka hatramin'ny roa taona. Izy io dia mifandraika amin'ny tondra-drano, haintany ary fikorontanana hafa manerantany.
Mandritra ny fepetra mahazatra, na ny tsy fisian'ny El Niño, dia mamely any andrefana manerana an'i Pasifika ny rivotra. Ireo rivotra ireo dia manondraka rano tondraka any amin'ny faritra andrefan'i Pasifika mba hahatonga ny moron-dranomasina eo amin'ny iray metatra metatra ambonin'ny any Indonezia noho ny manodidina an'i Ekoatera. Mipoitra avy any amin'ny morontsirak'i Però sy Ekoatera ny ranomasimbe avy any atsinanana ary mitondra rano mangatsiaka be dia be eny ambony rano sy mampitombo ny tahirin-jaza. Ny faritra tandrefana any amin'ny Pasifika any Ekopa dia misy karazana toetr'andro mafana, mafana, mavesatra, rehefa voan'ny rivo-mahery sy ny oram-baratra ny hafanana voaangona.
Mandritra ny hetsika ENSO dia misy ny fiakaran'ny tsindry avy any amin'ny Oseana Indianina, Indonezia ary Aostralia, ary ny fihenan'ny tsindry ahafatesana an'i Tahiti sy ny sisa amin'ny Oseana Atlantika afovoany sy atsinanana. Ny rivotry ny varotra ao atsinanan'i Pasifika dia mampihena na mitodika miantsinanana, ary ny rano mafana dia miparitaka any atsinanana avy any amin'ny Pasifika sy ny Ranomasimbe Indiana mankany atsinanana Pasifika ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoanimation et graphique de El Niño). Izany dia mitarika amin'ny hain-tany midadasika any Pasifika andrefana sy ny rotsakorana ao amin'ny Pasifika Arabo maina.
Na dia miavaka aza ny elanelan-dranomasina hafakely ao afovoan-tany atsinanan'ny Pasifika any atsinanan'i El Niño, dia miavaka ny ranomandry mangatsiaka tsy fahita firy any amin'io faritra io, fa ny rano mangatsiaka any Pasifika Andrefana. Mandritra ny taona maro, ny herinaratra dia maharitra herinandro vitsivitsy na iray volana, aorian'izay dia miverina amin'ny endrika ara-dalàna ary manatsara ny fanjonoana. Na dia eo aza ny fe-potoam-piasan'ny El Niño mandritra ny volana maromaro dia mihamafana ny fiakaran'ny ranomasina marobe ary ny fiantraikany ara-ekonomika eo amin'ny fanjonoana any an-toerana ho an'ny tsena iraisam-pirenena dia mety ho matotra.
Ity diagram ity dia maneho ny modelin'ny mari-pana eo amin'ny tontolon'ny rivotra, ny rivotra, ny rivotra mitsingevana, ary ny toeram-pandrefesana (faritra manga) any amin'ny Pasifika tropikaly mandritra ny fepetra El Niño, ara-dalàna ary ny La Niña. Kitiho raha hanitarana. Loharano: Office Project NOAA / PMEL / TAO, Dr. Michael J. McPhaden, Tale
Fampandrenesana ny ENSO
Ny hetsika ENSO dia dingana voajanahary ary efa hita ho an'arivony raha tsy an-tapitrisany taona. Ny vokatry ny ENSO dia tsy vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro, fa vokatry ny fifaneraserana eo amin'ny tontolon'ny ranomasina sy ny atmosfera tafahoatra any amin'ny Pasifika tropikaly. Na izany aza, azo antoka fa ny fiakaran'ny mari-panan'ny tany dia hanova ny fomba fitondran'i El Niño.
Hatramin'ny tapaky ny 1970, dia nisy andian-dahatsoratra El Niño matetika sy maharitra noho ireo episodian'i La Niña. Ny fiovan'ny toetr'andro any Pasifika tropikaly dia mifandraika amin'io fiovana io ao amin'ny ENSO, izay nisy fiantraikany teo amin'ny lamina sy ny haben'ny mari-pahaizan'ny ranomasina. Na dia izany aza dia tsy mazava loatra raha io fiovana io amin'ny fihodinan'ny ENSO dia vokatry ny fiovan'ny toetr'andro na mifandraika amin'ny fiakaran'ny mari-panan'ny tany.
Na dia mihevitra aza ny mpahay siansa sasany fa mety ho hitombo ny fisehoan-javatra ao El Niño, raha toa ka mitombo ny hafanam-pandrefesana amin'ny ranomasina, dia mbola fikarohana ara-pivelomana foana ny fiovan'ny El Niño amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fandinihana ny antontan-kevitra ara-tantara dia manolo-kevitra fa ny fiovaovan'ny El Niño dia toa mifamatotra amin'ny fiakaran'ny mari-pana. ref Mifanohitra amin'izany kosa, ny fikarohana vao haingana dia nanoso-kevitra fa ny fiovaovan'ny toetrandro dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny haben'ny ENSO amin'ny taonjato 21, fa mety hampihena ny fiantraikany. ref
Famaritana ny zava-nitranga tao ENSO
Tsy fantatry ny mpahay siansa ny fiovana mety hitranga amin'ny ENSO amin'ny ho avy, ary ny modelim-pahaizana momba ny toetr'andro no manao fitobahana. ref Ny fisehoan-javatra matetika sy mahery kokoa amin'ny El Niño dia mety hitranga raha tsy amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny fiakaran'ny mari-pahaizan'izao tontolo izao ary mety hihamalemy izany toe-javatra izany. Na ny hetsika El Niño dia mety hanohy hampatanjaka sy hampitombo ny ho avy. Noho ny fiantraikany goavana amin'ny lozam-pifamoivoizana naterak'i El Niño sy La Niña, dia tena zava-dehibe ny maminavina hoe rahoviana no hitranga izany.
Maro ireo fitaovana azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso, fikarohana ary fampahafantarana ny zava-mitranga amin'ny ENSO, ao anatin'izany ny fandraketana an-tserasera sy ety anaty ranomasina izay manakaiky ny angon-drakitra momba ny rivotra, ny mari-pahaizana momba ny ranomasina, ny rano, ary ny hafa. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny faminaniana dia araka ny marina amin'ny ankapobeny, fa ny hetsika manokana ataon'ny tsirairay dia sarotra ny maminavina. Milaza ny manam-pahaizana fa mety tsy marina ny filazalazana momba an'i El Niño na La Niña izay mihoatra noho ny 9 volana ho avy. Ny faminavina tsara kokoa dia azo atao amin'ny fandinihana modely maro fa tsy modely tokana (jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaony faminanian'i El Niño sy La Niña).
Ny El Niño sy La Niña dia afaka samy manana fiantraikany goavana amin'ny tontolo voajanahary amin'ny vatohara, indrindra amin'ny haran-dranomasina. Ny ENSO maneran-tany dia niteraka fatiantoka goavam-be sy vatom-pahafatesana nandritra ny 1982-1983, ref 1997-1998, ref 2002-2003, ref 2005, ref ary 2010, ary nanampy tamin'ny fihanaky ny karazana karazana. ref
Feo manga notononina tany Panama ref
Ny mari-pamantarana hafanam-be (SSTs) mifandraika amin'ny hetsika El Niño dia fantatra ho antony nahafaty an'i 50% ho an'ny vatohara ao Panama ary mihoatra ny 99% amin'ny vatohara any Galapagos ref
Vokatry ny fahafatesan'ny vatohara tsy mbola nisy toy izany sy ny fahafatesan'ny vatohara maneran-tany ref
Ny momba ny 70-80% ny vatoharan-dranomasina rehetra dia novonoina teo amin'ny vatohara Indo-Pasifika ary ny harambato Great Barrier
Ireo vatohara any Florida Keys dia nahitana fahamendrehana marefo ref
Ny ankamaroan'ny fanamainana dia nifanindry tamin'ny hetsika lehibe El Niño, avy hatrany nivadika ho any La Niña matanjaka
Ny mari-pahaizan'ny ranomasina any amin'ny Atlantika sy Karaiba tropikaly dia nahatonga ny iray amin'ireo hetsika maloto ratsy indrindra voarakitra tao amin'ny faritra
Ny tebiteby ara-pihetseham-po nandritra ny hetsika 2005 dia nihoatra ny hita avy any Karaiba nandritra ny taona 20 teo aloha, ary ny toetr'andro ara-potoana dia farafaharatsiny nandritra ny 150 taona ref
Iray amin'ireo taona faran'izay ratsy indrindra nandritra ny fitrandrahana haran-kisoa nanomboka tamin'ny hetsika 1997-1998 El Niño
Vokatry ny fahamamoana sy ny fiainana an-jatony manerana ny Ranomasimbe Indiana sy Azia atsimo atsinanana (miala amin'ny Seychelles any andrefana mankany Sulawesi sy Filipina any atsinanana ary ahitana vatohara any Sri Lanka, Birma, Thailand, Malezia, Singapore, ary tranokala maro any andrefana. ary atsinanan'i Indonezia) ary koa ny fivalozana mafy natao tany amin'ny faritra sasany any Karaiba (ohatra Venezoela sy Panama)
Na dia misy fifandraisana misy eo amin'ny fiparitahan'ny vatohara amin'ny 1997-1998 sy ny rafitra ENSO aza, dia tsy mazava ny lamina. Ohatra, nandritra ny hetsika 1997-1998, dia nitazana ny fivalozana tany amin'ny faritra atsinanan'i Pasifika nifanaraka tamin'ny hetsika El Niño. Mifanohitra amin'izany, ny fifangaroana tany atsimo atsinanan'i Azia dia nifanandrify tamin'ny fe-potoana 1998-1999 mafy La Niña, izay nitondra rano mafana tany Pasifika andrefana. Ny Ranomasimbe Indianina mihamafana tamin'izany fotoana izany dia nifanandrify tamin'ny fiakaran'ny hafanana nandritra ny El Niño, raha ny fijanonana ao amin'ny faritra sasany ao Karaiba dia nanaraka ny lamaody mahazatra amin'ny fahavaratra amin'ny fahavaratra manaraka ny El Niño. Na dia izany aza, dia tsy voatery ho trandrahana miaraka amin'ny zava-mitranga lehibe El Niño na ny La Niña. Ny hetsika lehibe nirehitra nalaina tany Karaiba dia niseho tao amin'ny 2005, nanaraka ny El Niño malemy, ary tsy dia nifandray tamin'ny elanelin'ny klioban'ny El Niño.ref Na dia eo aza ny fetran'ny fahalalàna ny fiantraikan'ny El Niño sy La Niña amin'ny fiatrehana ny haran-dranomasina, ny mpahay siansa dia manahy fa ny fampitomboana ny SSTs manerantany, ary ny fitomboana mety amin'ny toe-javatra El Niño dia mandrahona ny hivelona amin'ny haran-dranomasina. Tamin'ny oktobra 2015, NOAA dia nanambara fa ny hetsika fanarenana fahatelo (ary ratsy indrindra) tamin'ny tantaram-piainana dia nandeha tamin'ny alàlan'ny fiarahan'ny El Nino mahery sy ny fiakaran'ny mari-panan'ny tany. Hatramin'ny nanombohan'ny El Niño tao amin'ny 2014, dia nisy ny mivalona napetraka tao amin'ny Oseana Pasifika, ny Ranomasimbe Indiana, Karaiba, Aostralia, Hawaii, ary Florida Keys. Milaza ny mpahay siansa fa ny 93% amin'ny Harin-dranomasina Lehibe dia efa manga (amin'ny volana Aprily 2016).
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA El Niño
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNational Weather Service Climate Prediction Center
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoENSO Animation
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoData ao amin'ny efitrano fianarana: Famotopotorana El Niño mampiasa data tena izymanokatra fisie PDF